&#039;शेखर कोइराला सरकारी जागिरबाट आएका मान्छे हुन्, पार्टी चलाउन सक्दैनन् &#039; - Jhilko
'शेखर कोइराला सरकारी जागिरबाट आएका मान्छे हुन्, पार्टी चलाउन सक्दैनन् '
काठमाडौं, २० मंसिर । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले शेखर कोइरालाले पार्टी हाँक्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । नेता बस्नेतले शेखर कोइरालाले कांग्रेस पार्टीको नेतृत्व गर्नै नसक्ने ठोकुवा गरेका हुन् । उनले भने,‘शेखर कोइरालाको कांग्रेसमा के योगदान छ ? उहाँ त सरकारी जागिरबाट राजनीतिमा आएको मान्छे हो । शेखर कोइरालाले पार्टी चलाउन सक्दैनन् ।’
नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रशारण भएको ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा शेखर नेतृत्वमा उठ्ने चर्चा तथा परिचर्चा भैरहेको बेला नेता बस्नेतले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । बस्नेतले विपी कोइरालापछि कांग्रेसमा वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवानै सफल नेता भएको पनि दाबी गरे । उनले भने,‘वर्तमान सभापति सफल सभापति हो । उहाँ चारपटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभयो । हाम्रो पार्टीमा सभापति देउवासँग कसैलेपनि प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैन् ।’
उनले शेखर कोइरालालाई कांग्रेसका आम नेता तथा कार्यकर्ताले स्वीकार्दै नस्विकार्ने दाबी पनि गरे । उनले थपे,‘कांग्रेसमा उहाँको के योगदान छ ? उहाँ त एकपटक पनि जेल बस्नुभएको छैन । त्यसैले उहाँको कांग्रेमा कुनै भूमिका र औचित्य छैन् ।’
उनले पार्टीको महाधिवेशन अर्को फागुनभित्र हुने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘पार्टीको महाधिवेशन २०७७ भित्र हुन्छ । आउने महाधिवेशनमा पनि वर्तमान सभापति नै सभापतिको उम्मेद्धवार बन्नुहुन्छ । र, पूनः सभापति बन्नुहुन्छ ।’ उनले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक यही मंसिर २६ गते बस्ने तय भएको बैठक बस्नुभन्दा अघि नै बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग सहमति गरिने बताए । यदि सहमति नभए पार्टीको विधि र प्रक्रियाअनुसार महत्वपूर्ण नियुक्ति तथा निर्णय गरिनेपनि उनले सुनाए ।
उनले भने,‘अब सभापतिले विधि र प्रक्रियाअनुसार पार्टीको सम्पूर्ण संरचना पूरा गर्नुहुन्छ । यसमा अब कुनै द्धिविधा छैन ।’ अब बस्ने बैठकमा हालै सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनको बारेमा पनि समिक्षा गरिने भएकोले यो उपनिर्वाचनमा सभापति देउवाको कारण सफलता पाएको उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘कम्युनिष्टको गढ मानिने धरान र भक्तपुरमा हाम्रो उम्मेद्धवारी विजयी हुनुभयो । यो खुशीको कुरा हो ।’
काँस्की २ नम्बर क्षेत्रमा नेकपाकी विद्या भट्टराईले सहानुभुति भोट पाएर जितेको उनको दाबी छ । उनले भने,‘नभए, त्यो क्षेत्रमा विद्याजीले जित्ने मान्छे होईन, त्यहाँ उनीहरुको सहानुभुतिको भोट आएको छ । कम्युनिष्टहरुले सहानुभुतिको राजनीतिक गरिरहेका छन् ।’
'संविधानले सभामुखको रिक्तताको परिकल्पना गर्दैन् , तत्काल सभामुख चयन हुनुपर्छ '
यी हुन् १३औँ सागमा नेपालका लागि हालसम्मका ३९ स्वर्ण बिजेताहरु...
अत्यावश्यक कामबाहेक नागरिकलाई घरबाट बाहिर निस्कन रोक लगाएपछि ‘लकडाउन’को तेस्रो दिन...
सामाजिक सञ्जालमा कडा नियमन गर्दै सरकार, सर्वत्र तरङ्ग
सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहिष्णुता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले इन्टरनेटमा...
गाजामा हमासलाई हानेपछि लेबनानको प्यालेस्टाइनी अखाडामा इजरायली...
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गुरुङको घरमा आगजनी
बसुन्धारास्थिन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरूङको घरमा अज्ञात...